47 Meters Down (2017) – Myanmar Subtitles
Genre: Adventure, Drama, Horror, Thriller Director: Johannes Roberts Actors: Chris Johnson, Claire Holt, Mandy Moore, Yani Gellman Country: UK, USA Released: 16 Jun 2017 Score: 5.6 Duration: 89 min Quality: 1080p 5.1, Bluray 720p Years: 2017 View: 2,731
Google users – 74% liked
Genres – Adventure| Horror| Thriller
Translator – Myo Maung Maung
File Size – 1080p.BluRay.5.1CH.H265 (1.77GB), 720p.BluRay.H265 (1.06GB)
Link Types – Megaup, Soliddrive, Filerocks
ဒီကားလေးကတော့ 2017 ကထှကျရှိခဲ့တဲ့
Survival အမြိုးအစား ငါးမနျးကား တဈကားဖွဈပါတယျ။
ဒီကားမှာတော့ အဓိကဇာတျဆောငျ တှဖွေဈကွတဲ့ လီဆာ နဲ့ ကိတျ လို့ချေါတဲ့ ညီအဈမနှဈယောကျဟာ မက်ကဆီကို နိုငျငံကို အပနျးဖွခေရီးထှကျလာကွပါတယျ။ ဒီညီအဈမ နှဈယောကျဟာ ပငျလယျရအေောကျက ငါးမနျးတှကေို ကွညျ့ဖို့သှားရငျး ဖွဈခငျြတော့ သူတို့ရှိနတေဲ့ လှောငျခြိုငျ့ကို ထိနျးထားတဲ့ ကရိနျးက လှပေျေါကနေ ပွုတျထှကျသှားပါတယျ။ ပငျလယျရအေောကျ 47မီတာ အနကျကို မွုပျသှားတဲ့အခါမှာတော့….
လှပေျေါကလူတှနေဲ့ ဘယျလို ပွနျဆကျသှယျမလဲ???
စတာတှကေို ရငျတထိတျထိတျနဲ့ ကွညျ့ရမယျ့ ကားကောငျးလေး တဈကားဖွဈပါတယျ။
[ဇာတျလမျးအညှနျး နဲ့ ဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Myo Maung Maungပဲဖွဈပါတယျ]
ဒီကားလေးကတော့ 2017 ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့
Survival အမျိုးအစား ငါးမန်းကား တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားမှာတော့ အဓိကဇာတ်ဆောင် တွေဖြစ်ကြတဲ့ လီဆာ နဲ့ ကိတ် လို့ခေါ်တဲ့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်ဟာ မက္ကဆီကို နိုင်ငံကို အပန်းဖြေခရီးထွက်လာကြပါတယ်။ ဒီညီအစ်မ နှစ်ယောက်ဟာ ပင်လယ်ရေအောက်က ငါးမန်းတွေကို ကြည့်ဖို့သွားရင်း ဖြစ်ချင်တော့ သူတို့ရှိနေတဲ့ လှောင်ချိုင့်ကို ထိန်းထားတဲ့ ကရိန်းက လှေပေါ်ကနေ ပြုတ်ထွက်သွားပါတယ်။ ပင်လယ်ရေအောက် 47မီတာ အနက်ကို မြုပ်သွားတဲ့အခါမှာတော့….
လှေပေါ်ကလူတွေနဲ့ ဘယ်လို ပြန်ဆက်သွယ်မလဲ???
စတာတွေကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ကြည့်ရမယ့် ကားကောင်းလေး တစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
[ဇာတ်လမ်းအညွှန်း နဲ့ ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Myo Maung Maungပဲဖြစ်ပါတယ်]
(1.77GB) Download Soliddrive Myanmar 1080P 5.1CH
(1.77GB) Download Filerocks Myanmar 1080P 5.1CH
(1.77GB) Download Megaup Myanmar 720pBluRay
(1.06GB) Download Soliddrive Myanmar 720pBluray
(1.06GB) Download Filerocks Myanmar 720pBluray
#47 Meters Down (2017) #Download 47 Meters Down (2017) Full Movie #Free 47 Meters Down (2017) Download
Midnight, Texas ( Season2)
480p, BluRay 1080p 5.1, Bluray 720p